एकीकृत पार्टीमा कस्तो हुन्छ दुई अध्यक्षको हैसियत ? – Gorkha Sansar
एकीकृत पार्टीमा कस्तो हुन्छ दुई अध्यक्षको हैसियत ?
गोर्खा संसार २०७४, २५ चैत्र आईतवार ०६:४९
कहिले ओली, कहिले प्रचण्ड एक नम्बर नेता
काठमाडौं – एकीकृत पार्टीमा केपी ओली र प्रचण्ड दुवै अध्यक्षको हैसियतमा रहने निश्चित भइसकेको छ । दुवै अध्यक्षको जिम्मेवारी मिलाउन पहिलो नम्बरको वरीयता परिवर्तन हुने गरी अन्तरिम विधान बनाइएको छ ।
विधान प्रतिवेदनमा पार्टीका तर्फबाट हुने औपचारिक पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने स्पष्ट पारिएको कार्यदलका नेताहरूले बताए । यस व्यवस्थाअनुसार पार्टीले जारी गर्ने सर्कुलर, कुनै संवैधानिक निकाय वा संस्थालाई पार्टीका तर्फबाट पत्राचार गरिँदा दुवै अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नेछन् । आजको नयाँ पत्रिकामा यो समाचार छापिएको छ ।
सिसौको काठ र बँदेलको बच्चा चोरीनिकासी गरेका तीन फरार अभियुक्त पक्राउ
२०७७, ३० कार्तिक आईतवार १९:४७
कर तिर्दा ट्याक्स र भ्याटका अनावश्यक झण्झड अब नहुने
२०७५, १७ मंसिर सोमबार १६:०२
२०७७, २७ पुष सोमबार २१:५७